Malmö iyo Göteborg oo adkeeyey gargaarka dadka guryo la’aanta ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Guryo la'aanta. sawir: Hasse Holmberg / TT
Malmö iyo Göteborg oo adkeeyey gargaarka dadka guryo la’aanta ah
La daabacay torsdag 4 juli 2019 kl 12.33
Magaalooyinka Göteborg iyo Malmö ayaa dhowaan adkeeyey gargaarka ay helaan dadka guryo la’aanta balse aan qabin dhibaato balwad ama mid dhimir. Dadkan ayaa ugu horeynta heli doona degaan ku meel gaara ugu badnaan hal todobaad.
Anna oo run ahaantii magac kale leh ayaa ka mida dadka ay gurya la’aantu ku heysato Malmö.
– Arrintani waa wax lala yaabo, anigu waxan ahay hooyo kaligeed caruur heysata mana garanayo sida aan guri ku soo heli karo haddii la igu khasbo inaan todobaad kasta guuro, ayey tiri Anna.
Magaalooyinka Göteborg iyo Malmö ayaa hirgeliyey bishii meey in dadka guryo la’aanta ahi ee aan qabin dhibaato bulshadeed ay heli doonaan gargaarka lagama maarmaanka ah ugu badnaan todobo maalmood mar kasta si ay u helaan degaan ay ku hoydaan.
Lise Aragaw Johansson, xoghaye arrimaha bulshada oo ka howl-gasha Malmö ayaa sheegtay iney arrintani welwel u keentay iyada iyo kuwa la shaqeeya.
– Aad baanu u welwelsanahay. Haddii hoos loo dhigo gargaarka aan bixino siddee bay dadkani ku heleyaan degaan? Waa su’aal jawaab u baahan, ayey tiri.
Malmö ayaa go’aanka ay qaadatay ku saleysay dhowr xukun oo ay maxkamaddi gaartay kuwaasoo sheegaya in adeegga bulshadu bixiso ku koobnaado degaan u helidda dadka qaba dhibaato dhimir ama mid balwad. Sidoo kale magaalada Göteborg ayaa go’aankeeda ku saleysay iyadoo kharashka degaanka ee dadka guryo la'aanta kordhay mudadii u dhaxeysay 2011 iyo 2018. Kharashkaa oo marki hore ahaa 400 milyan ayaa imminka maraya hal bilyan oo karoon.